ZTE Quartz: Ny smartwatch mora indrindra amin'ny Android Wear 2.0? | Androidsis
Raha ampitahaina amin'ny ankamaroan'ny smartwatches azonao vidiana izao, ny ZTE Quartz dia gadget maoderina tokoa miaraka amina endrika mahaliana sy ambany ny vidiny.
El tsenan'ny smartwatch Tena hafahafa izany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Amin'ny lafiny iray, misy karazany marobe tokoa ka afaka mahita marika avy amin'ny tontolon'ny lamaody aza isika izay niditra tao amin'ity sehatry ny vokatra ity. Etsy ankilany, gadget ireo miaraka amin'ireo voafetra ny androm-piainana sy ny vidiny tsy mitombina.
Na i Apple aza dia nahatsapa fa tsy mitombina ny mangataka dolara an'arivony maro ho an'ny famantaranandro iray fa amin'ny 2 na 3 taona dia ho lasa miadana tokoa ianao ka te-hanala azy.
ZTE Quartz dia nahita ny fandanjana tonga lafatra eo amin'ny kalitao sy ny vidiny
Toa, ZTE dia manana ny fomba fahandro mety indrindra amin'ity tsena ity miaraka amin'ny smartwatch ZTE Quartz anao. Ity fitaovana ity no mpiorina amin'ny tsaho sy fivoahana marobe tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Azo alaina amin'ity volana ity, ny ZTE Quartz dia iray amin'ireo rindrambaiko mora vidy miaraka amin'ny Android Wear 2.0 ary mampientam-po tokoa ny endriny.
Mazava ho azy, tianay ny manandrana azy alohan'ny ahatongavana amin'ny famaranana farany, fa rehefa dinihina dia mitondra a Qualcomm Snapdragon Wear 2100 processeur ary amin'ny RAM 768MB, azo antoka fa ho smartwatch haingana be io.
Ankoatr'izay, ankoatry ny Android Wear 2.0 sy a Fahatsiarovana anatiny 4GB, ny ZTE Quartz koa dia manana bateria 500mAh, Module GPS sy fifandraisana LTE.
Ny fanohanana ireo tamba-jotra LTE dia singa iray tena lehibe, satria manamora ny fiantsoana mivantana an-tariby avy amin'ny famantaranandro, na inona na inona navelanao ao an-trano ny smartphone.
Mikasika ny endriny, ny ZTE Quartz dia miafina ao ambanin'ny a Fampisehoana AMOLED boribory 1.4-inch miaraka amina vahaolana teratany 400 x 400 teboka. Ary koa, metaly ny metaly azy ary azo soloina mora foana ny tadiny arakaraka ny safidinao.
Ny lafiny ratsy ihany amin'ny famantaranandro dia ny tsy fisian'ny sensor amin'ny tahan'ny fo ary ny modely NFC ho an'ny fandoavam-bola amin'ny Android Pay.
Ny vidin'ny ZTE Quartz dia $ 199 ary azo vidiana manomboka ny 14 aprily.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny ZTE Quartz dia mety ho smartwatch mora indrindra amin'ny Android Wear 2.0
Ny iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny Galaxy S8 dia tsy ho hita amin'ny fandefasana azy